Singabasebenzi abaqinisekisiweyo bakaGoogle | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 22, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Umzi mveliso we-Intanethi uyamangalisa. Ukuba uphuhlisa kwaye ugcina eyona encyclopedia inkulu yezemisebenzi yamavolontiya, ubonwa njengegorha. Ukuba uthumela abantu izimemo zasimahla zokuvavanya nokuphendula kwisoftware yakho ye-beta, awuyontshatsheli nje… upholile. Nangona kunjalo, ukuba uhlawula umntu iisenti kwidola ukuba enze umsebenzi, uyabaxhaphaza kwaye ubasebenzise. Iyamangalisa indlela esebenza ngayo… simahla ayilunganga, ixabiso eliphantsi alikho.
UGoogle yinkosi yokufumana inzuzo ngaphandle kwemisebenzi yasimahla. Bayazuza kuthi yonke imihla kwaye emva koko, sisebenzisa iinkonzo zabo kunye nesoftware. Singabakhonzi babo abangenanto.
Sibhala imixholo exabisekileyo kwaye siyipapasha kwi-Intanethi, sivumela uGoogle ukuba ayisebenzise kwiziphumo zophando, kunye nentengiso ebekiweyo kubathengisi bethu. Wamkelekile, Google!
Sifaka amakhonkco kumxholo wethu, sivumela uGoogle ukuba abeke inqanaba lamaphepha kwezi ziphumo zophando; ke ngoko, ukonyusa ixabiso lokukhangela… Wamkelekile, Google!
Sibhala umxholo omkhulu kuGoogle kwinkqubo yethu yeWiki (Ikhoba). Baye baqokelela ngaphezulu kwesigidi sephepha lolwazi ukuze babelane ... kwaye babeke iintengiso. Wamkelekile, Google!
Sibhala amaxwebhu enkxaso emangalisayo kwiiforum zemveliso. Oku kufuneka kugcine amaqela abo amawaka eeyure kumaxwebhu obugcisa kunye nenkxaso kubathengi. Wamkelekile, Google!
Sivavanya isoftware yabo kwaye sinikeze ingxelo yasimahla kunye nedatha yokusebenzisa kwimveliso nganye ye-beta… sibasindisa amashumi ezigidi kuvavanyo nenkxaso. Wamkelekile, Google!
Songeza iimveliso zethu kunye nezinto esizithengayo kuGoogle ukuze zibonakale ziziphumo… kwaye sihlawula uGoogle isabelo sentengiso… okanye benza imali kwintengiso ezihlawulelweyo kwabo sikhuphisana nabo. Wamkelekile, Google!
Sisebenzisa izikhangeli zabo kunye neenkonzo, ukongeza yonke idatha yobuqu, idatha yokukhangela, kunye nembali yokuthenga ukuze basijolise kwaye bathengise intengiso enexabiso ngakumbi. Wamkelekile, Google!
Sukundenza impazamo… Ndikulungele ukukhwela njengaye wonke umntu. Inkampani yethu isebenzisa iiGoogle Apps kunye neeapps zisebenza ngendlela emangalisayo. Ndisebenzisa phantse yonke into kaGoogle, kubandakanya nefowuni yam ye-Android… kwaye ndiyayithanda yonke. Ndibhala le posi kuGoogle Chrome .. isebenza kakuhle. Ndiyayithanda neGoogle +. Ndibhala malunga neemveliso zikaGoogle kunye neenkonzo kwiMartech ngalo lonke ixesha!
Ndikhe ndafuna amaxesha ambalwa malunga noGoogle. Kuyo yonke le nto, nangona kunjalo, khange ndicinge ukushiya uGoogle. Isakhono sikaGoogle sokuzoba kubaphulaphuli ngokubanika khulula izinto ziyamangalisa. Abantu bacela ukungena emnyango (njengoko uninzi lwethu lwenzayo xa uGoogle + wasungula).
Unokuphikisa ukuba konke kungokuzithandela.
Ngaba ukhe wazama ukufikelela usuku kwi-Intanethi ngaphandle kokubandakanyeka kuGoogle? Ndiqinisekile ukuba phantse ayinakwenzeka!
Okulandelayo kuluhlu lweenkosi zikaGoogle? Bonisa intengiso. Kuko oko… UGoogle ufuna ukuba uncede ukwenza ukuba iintengiso zifaneleke ngakumbi ngokucofa uGoogle +1 kumaqhosha kwintengiso. Andenzi oku.
Ukubonisa intengiso kuyaziwa njengezantsi kuluhlu lweendleko… kwaye zibi nangakumbi kwiziphumo. Kodwa ukuba uGoogle angacela uncedo lwakho ekuphuculeni indlela abayibeka ngayo intengiso kunye nokugweba ukubaluleka kunye nomgangatho wentengiso… bangaziphucula iziphumo kwaye benze imali eninzi. Ulinde ntoni kwizicaka? Fika emsebenzini!
Ukubaliswa kwamabali kuthelekiswa nokuthetha ngokudibeneyo